တို​တို​ထွာ​ထွာ​အ​ဖြေ​များ . ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
kaungkin "​အစ်​ကို​ရေ Mozilla firefox ​မှာ webpage ​တွေ​ကို Right Click ​လုပ်​လို့ ​မ​ရ​တော့​လို့ ​ဘယ်​လို ​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​ဆို​တာ ​သိ​ချင်​ပါ​တယ် ​ခင်​ဗျာ"
​ကျွန်​တော် ​တစ်​ခု​အ​သိ​ပေး​ချင်​ပါ​တယ် . ​အား​လုံး​ကို ​အ​ခု​ကျွန်​တော်​တို့ firefox ​က 3.5 ​ထွက်​နေ​ပါ​ပြီ . ​အ​ဟောင်း​ကို ​သုံး​နေ​တဲ့​သူ​များ update ​လုပ်​လိုက်​ကြ​ပါ . kaungkin ​က ​အ​ဟောင်း​နဲ့​တူ​တယ်. ​အောက်​က​နည်း (၃)​မျိုး​မှာ ​အ​ဆင်​ပြေ​တာ​နဲ့ ​သုံး​ကြည့်​လိုက်​ပါ . ​အ​ဆင်​ပြေ​မှာ​ပါ . ​တစ်​ခု​ပြော​ချင်​ပါ​တယ် . OS ​က ​အ​ခု​တင်​ထား​တာ window ​လား ..
​နည်း​လမ်း(၁) ​ယ​ခု​လက်​ရှိ​သုံး​နေ​တဲ့ firefox ​ကို ​ဖြုတ်​ပြီး ​ဒီ ​က​နေ ​အ​သစ်​ဒေါင်း​ပြီး​တော့ ​ပြန်​တင်​လိုက်​ပါ .
​နည်း​လမ်း(၂) ​ဒီ​က​နေ Browse in the Fast Lane ​ကို download ​လုပ်​ပြီး ​စမ်း​သုံး​ကြည့်​ပါ​ဦး
​နည်း​လမ်း(၃) Tools >> Add-ons >> find update ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပြီး​ရှာ​လိုက်​ပါ . ​ပြီး​တာ​နဲ့ ​သူ​က​နေ update ​မ​ဖြစ်​တာ​တွေ​ကို ​တစ်​ခု​မ​ကျန် ​အ​ကုန်​လုံး​ကို ​တစ်​ခု​ပြီး​တစ်​ခု install ​လုပ်​လိုက်​ပါ . ​တစ်​ခု​မှ ​မ​ချန်​ထား​ပါ​နဲ့ . ​တွေ့​သ​မျှ​ဟာ​ကို install ​လုပ်​လိုက်​ပါ .
sawkyibel April 30, 2010 at 12:03 AM
​အ​ကို​ရေ ​ကျွန်​တော် ​အ​ကို​ဆိုဒ်​ကို​ရောက်​တာ​မ​ကြာ​သေး​ပါ​ဘူး​တော်​တော်​စုံ​တယ်​ဗျာ ​အ​ကို့​ကို​မေး​စ​ရာ​ရှိ​လို့​ပါ
​ညီ ​ဆီ​မှာ Opera run ​ထား​ပါ​တယ်​ဒါ​ပေ​မယ့်
​မြန်​မာ​ဖောင့်​မ​ရ​ဘူး ​ဖြစ်​နေ​ပါ​တယ် preferences